1 Paulo, Kristo Yesu somafo,+ sɛnea yɛn Agyenkwa+ Nyankopɔn+ ne Kristo Yesu a ɔyɛ yɛn anidaso+ no ahyɛ, 2 de kɔma Timoteo+ a ɔyɛ ɔba+ pa wɔ gyidi mu: Agya Onyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu adom, mmɔborɔhunu, ne asomdwoe nka wo.+ 3 Sɛnea bere a merebɛkɔ Makedonia+ no mesrɛɛ wo sɛ tena Efeso no, saa ara na seesei nso meresrɛ wo na woatu ebinom fo+ sɛ ɛnsɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ foforo+ 4 anaa wotie atosɛm+ ne abusua santen ho nsɛm a enkosi hwee,+ na ɛde nsɛmmisa a ɛsɛe bere mmom na ɛba sen sɛ ɛbɛma wɔanya biribi afi Onyankopɔn hɔ de ahyɛ afoforo gyidi den no. 5 Nokwarem no, adwene a ɛwɔ ahyɛde yi akyi ne ɔdɔ+ a efi koma a emu tew,+ ahonim+ pa ne gyidi a nyaatwom+ nnim mu. 6 Ebinom aman+ afi eyinom ho kɔ nsɛnhuhuw+ so, 7 na wɔpɛ sɛ wɔyɛ mmarakyerɛfo,+ nanso wɔnte nsɛm a wɔka no ne nea wogye gyina mu denneennen no ase. 8 Yenim sɛ Mmara no ye,+ bere a obi di ho dwuma sɛnea ɛsɛ no,+ 9 na ɛsɛ sɛ ohu nokwasɛm yi sɛ, ɛnyɛ treneefo nti na wɔyɛ mmara, na mmom mmaratofo+ ne asobrakyefo,+ amumɔyɛfo ne nnebɔneyɛfo, wɔn a wonni adɔe,+ wɔn a wommu akronkronne, wɔn a wokum wɔn agyanom anaa wɔn nanom, awudifo, 10 aguamammɔfo,+ mmarima a wɔne mmarima da, wɔn a wɔkyere nkurɔfo sie, atorofo, wɔn a wɔka ntanhunu,+ ne biribi foforo biara a etia+ nkyerɛkyerɛ pa,+ 11 sɛnea anigye+ Nyankopɔn no anuonyam asɛmpa a wɔde ahyɛ me nsa+ no te no. 12 Meda yɛn Awurade Kristo Yesu a ɔhyɛɛ me den no ase, efisɛ wabu me ɔnokwafo+ de me ahyɛ ɔsom adwuma bi mu,+ 13 ɛwom, bere bi a atwam no na meyɛ mmusubɔfo, metaa nkurɔfo,+ na meyɛɛ aniammɔho.+ Nanso wohuu me mmɔbɔ,+ efisɛ na minnim nea mereyɛ,+ na gyidi a na minni nti na meyɛɛ saa. 14 Nanso yɛn Awurade adom dɔɔso boroo so,+ a gyidi ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu+ ka ho. 15 Nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wogye tom koraa+ ne sɛ Kristo Yesu baa wiase begyee nnebɔneyɛfo+ nkwa. Me na midi kan wɔ wɔn a wɔte saa no mu.+ 16 Nanso, wohuu me mmɔbɔ+ sɛnea ɛbɛyɛ a Kristo Yesu bɛfa me a midi kan no so ayi n’abodwokyɛre nyinaa adi, de ayɛ nhwɛso ama wɔn a wobegye no adi+ anya daa nkwa+ no. 17 Na nidi ne anuonyam nka mmeresanten Hene+ a ɔmporɔw+ na wonhu no+ a ɔyɛ Onyankopɔn koro+ pɛ no daa daa.+ Amen. 18 Me ba Timoteo, ahyɛde+ yi na mede hyɛ wo nsa, sɛnea nkɔmhyɛ+ a ɛfa wo ho tẽẽ no kyerɛ no, na woafa eyinom so akɔ so ako ɔko pa+ no, 19 bere a wukura gyidi ne ahonim pa+ a ebinom apia ato nkyɛn+ ama wɔn gyidi agu asu+ no mu no. 20 Wɔn mu binom ne Himeneo+ ne Aleksandro,+ na mede wɔn ama Satan+ na nteɛso ama wɔasua sɛ ɛnsɛ sɛ wɔka abususɛm.+